Qalabka daaweynta Shiinaha ee dib-u-hagaajinta taageerada gadaal warshad suunka iyo alaab-qeybiyeyaasha. AoFeiTe
Daweynta hagaajinta muuqaalka gadaal ee suunka xarkaha
Waxyaabaha:Kale, Neoprene, Dhagaxyada Magnetic, Xargaha Elastic, Leather
Cabir:SML XL XXL, SML XL XXL, Back Brace
Feature:Neefsasho, Laastik, waxay hagaajineysaa Jirkaaga
Jinsiga:Universal, Dhaqdhaqaaqa Daabacaadda, Universal, Gargaarka Xanuunka Dhabarka
Midabka:Madow, casaan, cadaan, cadaan, madow, casaan
Adeeg:OEM / ODM, Taageerada Dhabarka
Calaamadda:Daabacan Karto Calaamadaada
Magaca Product:Daaweynta Daaweynta Dabeecadda Dib-u-hagaajinta Taageerada Xargaha
Wax soo saarka:70000 Cadad / Cadad Bishii
Kartida Bixinta:70000 Cadad / Cadad Bishii
Shahaadada:CE, FDA, BV, ISO13485, ISO90001
Ma waxaad raadineysaa soo-saaraha saxda ah ee Soo-celinta & Soo-saaraha? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhamaan Jirka Saxida Dhabarka Dammaanadda ayaa leh dammaanad tayo leh. Waxaan nahay Shiinaha Asal Factory of Therapy Daabacada posture. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Qaybaha alaabta: Saxeexa Jirka
Wanaag wanaagsan oo raaxo leh
Xirmooyinka dhabarka Royal waxay taageeraan hagaajinta muuqaalka
Dib-u-hagaajinta Muuqaalka Dhabarta Dhabarta
dhexda tayo sare leh hagaajinta qaabeyaha toosan
Garabka taageerida rajabeeto hagaajiye magnetic ...
Jirka hagaajin karo hagaajiye maqaar Brace Oem ...